U-Ivan Okhlobystin wenqaba ukutyunjwa ukuba abe ngumongameli weRussian Federation
Iintlanganiso zeendlovu zikaVladimir Putin kunye neendaba zeentatheli zazikhunjulwa ezininzi nge-anecdote malunga ne-watch ⌚️ ne-kortik. Ibali sele liqhubekile kwi-intanethi: abasebenzisi bayayilumkisa ihlaya likaPutin baze bafanise.
Kwabo abaphosakele inkomfa yenkampani yomongameli waseRashiya kunye neengxelo zeendaba, sishicilela ividiyo apho uVladimir Putin etshela i-anecdote malunga nomdaka kunye nomlindi:
Udokotela kunye nomfundisi u-Ivan Okhlobystin kwi-Instagram yakhe namhlanje wabeka umfanekiso onobumba esandleni sakhe. Ngesinye isikhathi kwisandla somculi sinokubukela okubi kakhulu. Ngaloo ndlela, u-Okhlobystin wabonisa isimo sakhe sengqondo kwisigijimi sikaMongameli: kubalulekile ukugcina izixhobo, kodwa nokufumana iindlela zokufumana ezinye izinto eziyimfuneko. Ifoto entsha kwi-Instagram i-Ivan Okhlobystin isayinwe:
Yaye iwashi kwaye i-dagger ayivuki ....
U-Ivan Okhlobystin wachaza isizathu sokuba akafuni ukuba ngumongameli
Ixesha elide liyaziwa ngabalandeli bakhe. Igama lomdlali we-actor luye lwaluhlu lwamnyama "lweentshaba" zaseburhulumenteni baseUkraine iminyaka emininzi. Inkwenkwezi ye "Internov" iye yavakashela ngokuphindaphindiweyo iRiphabhlikhi Yabantu baseChina kunye neRiphablikhi yabantu baseChina, igxeka ngokucacileyo oko kuthiwa ukunyamezela (umdlali wambi wabiza ukutshisa ngandlela-thile kwi-oven ovens). Phakathi kweengcamango zikaIvan Okhlobystin kukubuyiselwa kobukhosi eRussia.
Ngaphantsi komfanekiso kunye newashi kunye neengqungquthela, okwenziwa yi-Okhlobystin kwi-microblog yakhe, abalandeli bezakhono zabuza ukuba u-Ivan Ivanov uya kucela inkundla yentloko. Umdlali we-actor wavuma ukuba wayengakulungele ukuyeka indlela eqhelekileyo yokuphila ukuze azinikezele kulo msebenzi onoxanduva:
Musa ukwenza! Wena ungumongameli okanye yonke into. Nika entliziyweni: Andikulungele ukuyeka "yonke into". Abantwana babaluleke kakhulu. Konke kutshabalalisa ngaphandle koThixo kunye nosapho.
U-Olga Buzova waziqhayisa ngesifuba esandisiweyo, isithombe
Ingulube eneapulo kunye anyanisi
Igazi legazi: imeko zokusetyenziswa
Imidlalo kunye nemincintiswano yeSanta Claus kunye ne-Snow Maiden: ehlekisayo ekhaya kunye nabantwana, ujabulele i-kindergarten kunye nesikolo, ujabule
Inkwenkwe emncinci: Iingubo zefestile intombazana ezandleni zakhe
Yintoni ekhusela abafazi ekusebenzelaneni namadoda
Iipancake kunye namazambane kunye nama-parsnips
Iqumrhu: imithetho yokusinda
Umfana wam ngumculi
Xa ubhiyozela uNyaka omdala omtsha (usuku lweVasiliev)
Iinqunqa ezisiweyo ezivela kwi-squid
Ukunqoba kwi-show "Izwi. Abantwana »Danil Pluzhnikov bafumana indlu entsha eSochi